VaEdgar Lungu Voramba Vachikundwa Mumatunhu Akawanda Musarudzo dzekuZambia
Nyamavhuvhu 15, 2021
Kuverengwa kwemavhoti kuchiri kuenderera mberi muZambia umo mutungamiri webato guru rinopikisa reUnited Party for National Development VaHakainde Hachilema vakatungamira.
VaHachilema vari kukwikwidzana zvakasimba nemutungamiri wenyika iyi VaEdgar Lungu vebato rePatriotic Front. Sangano rinoona nezvesarudzo muZambia reElectoral Commission of Zambia rinoti kusvika parizvino, VaHichilema vave nemavhoti mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2,3 .
VaLungu vane mavhoti miriyoni imwe chere nezviuru mazana mana kana kuti 1, 4 million. VaLungu vakaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka nekuti vamwe vatsigiri vavo vaviri vakaurayiwa.
Asi mapato anopikisa akabva apindura achiti vaitaura semunhu ari kuziva kuti akakundwa musarudzo uye vakati ivo VaLungu vaishandisa mapurisa kuvhiringidza vanopikisa kutsvaga rutsigiro nekurega vatsigiri vavo vachiita zvemhirizhonga.
Vanhu vakawanda zvikuru muZambia zvikuru vechidiki vakaenda kunovhota musarudzo dzakavhotwa nevanhu vakawandisa kudarika dzakaitwa muna 2016. Vechidiki ava vanoti vari kuda mabasa uye vaLungu vainge vakundikana kuvapa mabasa.
Vanhu gumi nevatanhatu ndivo vakakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network uye vari kuongorora sarudzo dzemuZambia Amai Ellen Kandororo-Dinganio vanoti zvaitwa neZambia zvinoratidza kuti Zimbabwe inokwanisawo kuita sarudzo munguva yeCovid-19.
Zimbabwe iri kuramba kuita sarudzo ichiti iri kutyira kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Hurukuro naAmai Ellen Kandororo-Dingani